Jeneraal Dhaga badan: Maxaa lagu xusuusan doonaa ? - Wargeyska Faafiye
Home 2015 November 1 .Warka, Ciyaaraha/Sports Jeneraal Dhaga badan: Maxaa lagu xusuusan doonaa ?
Allaha u naxariistee Abaanduulihii hore ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Cabdikariin Yuusuf Aadan “Dhago badan” oo ka mid ahaa dadkii ku dhintay weerarkii argagixisada Al-Shabaab ay ku qaadeen Hotelka Saxafi ee magaalada Muqdisho.
Allaha u naxariistee Cabdikariin Dhago badan ayaa lagu xasuustaa in uu ahaa nin geesi ah oo hogaaminayay howlgalladii ugu adkaa ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kula wareegeen deegaanno dhowr ah oo ay Shabaabka dadka ku dhibaateyn jireen, waxaana uu had jeer markii ay socdaan howlgallada shacabka ugu bishaareyn jiray in guud ahaan dalka laga xoreyn doono deegaannada ay Shabaabku ku dhuumaaleysanayaan.
Jeneraal Dhego badan ayaa door wayn ku lahaa howlgalladii maleeshiyaadka Al-Shabaab looga xooreyay magaalada Muqdisho sanadkii 2011.
Allaha u naxariistee Dhago badan waxaa kaloo uu ahaa shaqsigii argagixisada Al-Shabaab ugu yeeray ereyga “JID IYO JAHO DIID” kaasi oo uu caan ku ahaa erey bixinta uu u sameeyay, isla markaana
Maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa in badan ku guul dareystay inay dilaan, iyagoo ku fashilmay isku dayo dhowr ah oo ay sameeyeen argagixisada Al-Shabaab, waxaana wararka qaar ay tilmaamayaan in saacad ka badan uu iska caabiyay kooxihii maanta weerarka ku qaaday Hotelka Saxafi, inkasta oo markii dambe uu u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray bam gacmeed lagu tuuray.
Shacabka iyo dowladda ayaa tebi doonto doorkii uu ku lahaa la dagaallanka argagixisada Al-Shabaab.
Maxamed Faarax oo Markale Guuleystay
Gaas oo ka soo laabtay shirkii New York
Abuu Muscab oo digniino u jeediyay reer Muqdisho.